Ny Nokia 5.1 Plus dia azo aseho amin'ny 17 Jolay | Androidsis
Eder Ferreno | | Finday, About us
Ity herinandro ity nofoanana ny fampisehoana ny Nokia 5.1 Plus any Sina, taorian'ny olana tamin'ny toerana hanaovana io hetsika io. Ny orinasa dia tsy nanome fanazavana vitsivitsy momba ny antony manokana. Ho fanampin'izay, tsy nanambara daty fampisehoana vaovao ihany koa izy ireo, izay nametraka tamin'ny media ny fanontaniana vitsivitsy. Soa ihany, afaka andro vitsivitsy, dia efa manana fampahalalana bebe kokoa isika.
Satria toa izany ny Nokia 5.1 Plus dia efa manana daty fampisehoana vaovao. Ary tsy mila hiandry ela intsony isika vao hahafantatra ny telefaona vaovao afovoan'ny marika. Satria amin'ity herinandro ity ny fampisehoana.
Ny 17 Jolay no daty nofidian'ny HMD Global hanolorana ity Nokia 5.1 Plus ity. Na dia amin'izao fotoana izao dia tsy daty izay voamarina tamin'ny fomba ofisialy, tsy tokony haharitra ela izany. Ka amin'ity talata ity dia azontsika atao ihany ny mahafantatra an'io antonony io.
Noho izany, mandra-pahatongan'ny fanamafisana avy amin'ny HMD Global raisinay ho tsaho izany. Ankoatr'izay, ny toerana sy ny toerana hanaovana ity fampisehoana ity dia tsy fantatra amin'izao fotoana izao. Ka betsaka ny zavatra tsy fantatra eny amin'ny rivotra amin'izao fotoana izao.
El Nokia 5.1 Plus no anarana iraisan'ny telefaona, izay any Sina dia havoaka ho Nokia X5. Toe-javatra iray mitovy amin'ny mitranga amin'ny Nokia X6, izay amin'ity herinandro ity dia hanomboka amin'ny tsena hafa ivelan'i Shina. Samy maodely tonga hanamafisana ny elanelan'orinasa ireo orinasa ireo.
Manantena izahay fa hanana fampahalalana bebe kokoa mandritra ny androany amin'ny fampisehoana an'ity Nokia 5.1 Plus ity. Raha marina ireo tsaho ireo dia tsy mila miandry ela intsony isika vao hahafantatra ny elanelam-potoana vaovao an'ny marika. Hihaino tsara kokoa ny fanamafisana izahay momba an'io. Mihevitra ve ianao fa hatolotra amin'ity herinandro ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Nahazo daty fampisehoana vaovao ny Nokia 5.1 Plus
Sivanina sasantsasany amin'ny Xiaomi Mi Max 3